Ukuvakalisa Iingcinga Nemithandazo Xa Umntu Esifa - Amagama Onduduzo Emva Kukufa
Ukuvakalisa Iingcinga Nemithandazo Xa Umntu Esifa
Iingcinga kunye nemithandazo libinzana elihlala lisetyenziselwa ukuthuthuzela abantu abasentlungwini. Ngelishwa, ayinguye wonke umntu olithandayo ibinzana loxolo, iingcinga kunye nemithandazo, ke unokufuna ukufumana enye indlela yokubonisa uvelwano.
Intsingiselo yokuThetha iiNgcinga kunye neMithandazo
Intsingiselo yebinzana elithi, 'usezingcingeni nasekuthandazeni kwam' kuthethwe komnye umntu osentlungwini kucacile. Uzigcina kwiingcinga zakho kwaye uzibandakanya kwimithandazo yakho. Eli binzana lisetyenziselwe ukubonisa inkxalabo nenkathalo. Abanye abantu bayayiphikisa le ntetho, besithi iyinto nje encinci kwaye ayiziva inyanisekile.
Amagama afanelekileyo okuthuthuzela umntu osentlungwini
Oko Umele Ukuthethe Kwinkonzo Yesikhumbuzo
Imiyalezo enzulu yovelwano yokulahleka kukaTata
Imbali yeengcinga zamabinzana kunye nemithandazo
Imvelaphi yebinzana, 'iingcinga nemithandazo,' ayicacanga. Ngokwembali, eli binzana laqwalaselwa ngamanani oluntu njengefanelekileyoindlela yokudlulisa amazwi ovelwano. Eli binzana lisetyenziselwe abo basindayo kwiintlekele zendalo kunye neentlekele ezibangelwe ngabantu, ezinjengeNkanyamba uKatrina okanye iColumbine High School zokudubula.
Ukugxekwa kweengcinga zamazwi kunye nemithandazo
Abagxeki bebinzana, 'iingcinga nemithandazo' baphikisa ngelithi la ngamagama angenantsingiselo. Bagxeka abezopolitiko kunye namanye amagosa aseburhulumenteni ngokusebenzisa amagama asilelayo ukuthwala ubunzima bezenzo ukunqanda iintlekele ezibangelwa ngabantu okanye ukubonelela ngezisombululo ezibalulekileyo kwiintlekele zemvelo.
Iingxoxo zokuGxekwa ngokungenabulungisa
Abanye abantu bathi ukugxekwa ngokusebenzisa ibinzana, 'iingcinga kunye nemithandazo' xa umntu eswelekile ayisiyonto imbi okanye ingeyomntu. Bacacisa indlela eli binzana eliquka ngayo ukucamngca okunentsingiselo kunye nokholo olusuka entliziyweni kumandla omthandazo.
Ukusetyenziswa gwenxa kweNgcaciso yokuZala ukuDelela
Kuyenzeka kakhulu ukuba ukusetyenziswa gabalala kwebinzana, 'iingcinga nemithandazo' xaevakalisa amazwi ovelwanowenze ukuba kubonakale ngathi ayinyani okanye ibinzana nje lokuthetha. Ngokuqinisekileyo kukho amanye amabinzana ovelwano onokuwasebenzisa ukuthuthuzela abantu ababuhlungu.
Iindlela ezizezinye kwiingcinga zamabinzana kunye nemithandazo
Ukuba unqwenela ukunika umntu othe wakhathazeka kabuhlungu intsingiselo, okanye ukucinga, unokusebenzisa elinye ibinzana. Zama ukukhetha ibinzana elinika uluvo olufanelekileyo kusapho lomntu ongasekhoyo.
Wanga uThixo angayithuthuzela kwaye ayithomalalise intlungu yakho
Ndicinga ngawe kwaye ndithandazela uxolo nentuthuzelo kaThixo.
Ndaba lusizi ukuva ngokudlula [kwegama lomfi].
Ndikhanyisele usapho lwakho ikhandlela ndaza ndathandazela [faka igama lomntu ongasekhoyo] ukugcinwa okukhuselekileyo.
Ngamana uthando lukaThixo lungasusa intlungu yakho.
Uyazi ukuba ndilapha kuwe kwaye unganditsalela umnxeba nanini na emini.
Ndikuthandazela ukuba ufumane intuthuzelo kwisithembiso sikaKristu sobomi obungunaphakade.
Ngamana wena nosapho lwakho ningafumana uxolo nentuthuzelo.
Ndithumela imithandazo yam ukuba intuthuzelo noxolo lukaThixo lusikelele wena kunye nosapho lwakho.
Iingcinga zam kunye nemithandazo ndinawe.
Bendifuna ukudlulisa amazwi ovelwano ukwazisa ukuba ndicinga ngawe.
Ngamana ungafumana amandla kuthando lukaKristu ngokuzinikela kunye nokholo.
Ukugcina kwiingcinga zethu nasemithandazweni.
Ndisandula ukuva ezindaba malunga nokudlula [faka igama lomntu ongasekhoyo] kwaye ndifuna wazi ukuba ndibuhlungu kangakanani.
Nceda wamkele amazwi endithuthuzela ngawo kwaye uyazi ukuba ndikuthandazela wena kunye nosapho lwakho.
Ndinqwenela ukuba amazwi am angayisusa intlungu yakho.
Ungayama ngam nanini na xa ufuna.
Ndifuna uyazi indlela ekhethekileyo [faka igama lomfi] kum.
[Faka igama lomntu ongasekhoyo] wayethandwa ngabantu abaninzi.
Andazi ukuba siza kwenza ntoni ngaphandle kokufaka [igama lomfi]. Sasimthanda kakhulu!
Besihleli sisazi ukuba sinokuxhomekeka [Faka igama lomntu ongasekhoyo] kwaye simthande ngakumbi ngenxa yoko.
[Faka igama lomfi] ukholo lwalomelele kwaye luhlala lundithuthuzela.
Umthandazo wam kukuba ufumane intuthuzelo noxolo ngoYesu Krestu.
Uvelwano lwam ngokulahleka kwakho.
Ngamana ubabalo lukaThixo lungakunika uxolo nentuthuzelo.
Ukufumana iingcinga ezilungileyo kunye nemithandazo yemifanekiso
Ungasebenzisa imifanekiso kunye neengcinga ezizodwa kunye nemithandazoNdivakalise amazwi ovelwano. Umfanekiso unokuyithuthuzela intliziyo yosizi, ngakumbi xa ukhatshwa ngamazwi ovelwano.
Ukukhetha ukuvakalisa uvelwano lwakho ngeengcinga nangemithandazo
Kuthatha ukucinga ukucinga ngendlela eyiyo yokuvakalisa izimvo kunye nemithandazo yovelwano kumntu osentlungwini. Gcina ukhumbula ukuba xa uthetha ngokusuka entliziyweni, amagama akho amkelwa ngentliziyo.
Ukucoca Imiboniso Yeslides Ikrismesi Iincwadi Ne Iifilimu Diy Ifanitshala Isinxibo Sangaphandle Cheerleading Slideshows
Ulusu Care Brands
Ngaba i-hydrogen peroxide ibulala i-covid 19 ezandleni
Kuthatha ixesha elingakanani ukucwangcisa umngcwabo
iikowuti ezihlekisayo malunga nokuba ngumama
Ndingazihlamba iikawusi zam zomqamelo
Amathuba okuhamba simahla abafundi bezikolo eziphakamileyo
ingakanani indawo yokubuyisela inaliti yamafutha
Ukuthandana Conversation Topics